Igodo Omume Omume Ọ bụla Onye Isi Nchịkwa Kwesịrị Sochie | Martech Zone
Igodo Mmemme Isi Ihe Ndị Isi Niile Kwesịrị Sochie
Wenezdee, Machị 6, 2019 Wenezdee, Machị 6, 2019 Ravi Chalaka
Onye ji aka ya azụ ahịa na-aghọta uru ndị na-abịa site n’ihe omume. Kpọmkwem, na oghere B2B, ihe omume na - eweputa ndu karia ihe ahia ndi ozo. O bu ihe nwute, otutu ndu adighi abanye ahia, na-ahapuru ndi ahia ka ha kpughee KPI ndi ozo iji gosi uru nke itinye ego na ihe di n'ihu.
Kama ilekwasị anya kpamkpam na ndu, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịtụle metric na-akọwa etu ndị ahịa, ndị ahịa ugbu a, ndị nyocha na ndị ọzọ natara ihe omume a. Maka ndị isi, inwe ike ịghọta otu esi emelite ahụmịhe ihe omume niile nwere ike inye aka mee ka nsonaazụ kacha mma n'ọdịnihu.
Ikpughe metrics ndị a dị mfe ikwu karịa eme. Iji nyere ndị na-azụ ahịa aka ịchekwa mmefu ego ọ ga-eme n'ọdịnihu, m chịkọtara usoro atọ ndị ahịa nwere ike iji CMO ha mee ihe
Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ahịa na ụzọ ọhụụ ga-abụ ihe kacha mkpa maka CMO, ha ka na-echekwa maka usoro ndị ọzọ dị ka njirimara akara. N'oge ihe omume, gbaa mbọ hụ na ị debara usoro metrik ndị ọzọ dịka nleta weebụsaịtị, ọnụọgụ ajụjụ ọnụ maka ịhazi yana mgbasa ozi mmekọrịta. Iji hụ mmetụta nke usoro ndị a, lee akụkụ nke olu tupu na post-ihe iji hụ ma ị nwere ike iwepụ ndị asọmpi mgbe ị na-aga ihe omume ahụ. N'ikpeazụ, enwere ike iji ihe omume kpokọta echiche nke atọ. Tụlee ịnabata nyocha n'oge mmemme iji gosipụta nsonaazụ gbasara mkpokọta akara ngosi ma ọ bụ mmata iji kọọrọ gị CMO.
Onu ogugu nke nzuko
Kwa ụbọchị, anyị niile na-enwe nzukọ site na telifon. Agbanyeghị, iwepụta oge iji nwee nzukọ ihu na ihu dị mkpa iji mechie azụmahịa. Wepụta oge tụọ ọnụ ọgụgụ nke nzukọ ihu na ihu n'oge mmemme gị ma jiri ọnụ ọgụgụ ahụ tụnyere usoro ndị a:
Njide Ndị Ahịa: Ain nweta ndị ahịa ọhụrụ dị mkpa, mana ịdebe ndị ahịa gị ugbu a nwere ike rụọ oke ọrụ na ịchekwa ihu gị na ịba ụba ego. Nzukọ mmadụ na-eme nwere ike inye aka mee ka mmekọrịta ndị a sikwuo ike ma malite mkparịta ụka dị mkpa.
Buru Ahia: Na ọtụtụ ndị ahịa na-agagharị otu ihe omume dị ka gị, mee ya otu isi iji ohere a wulite mmekọrịta ma bulie azụmaahịa n'ime akaụntụ ndị dị ugbu a.
Deals na-emechi: Have nwere metrik iji gosi ole nzukọ ihu na ihu dugara na azụmahịa emechiri? Kedu ihe ọzọ kere òkè na imechi azụmahịa ahụ? Otu SME ma ọ bụ onye isi ọrụ? Site n'inwe ozi a ị nwere ike ịhazi atụmatụ maka ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Ego ha nwetara
Ndọtị n'etiti ahịa na ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịdaba ụgbọala, na-emechi azụmahịa na n'ikpeazụ, na-abawanye ego. Ihe omume na-enye ndị otu ọrịre na ndị ahịa otu ụlọ ahịa na-akwụsị otu ihe metụtara mmetụta nke ụlọ ọrụ. Iji gosipụta nke a na CMO, gbaa mbọ tụọ usoro ndị a na-etinye ego na-akpata:
Onu ogugu: N'ezie ụlọ ọrụ ga-ntukwasi-obi na ihe omume, ma ndị na-eduga mgbe niile ruru eru? Kama ịchọọ ọnụ ọgụgụ nke ndu na ihe omume, soro ọnụọgụ nke demos emechara. Nke a nwere ike inye ndị otu nghọta doro anya banyere ndị ahịa nwere ike ịmasị n'ezie na ngwaahịa ma nwee ike ịchekwa oge maka ndị ahịa. Na mgbakwunye, metrik a nwere ike igosi CMO ọrụ nke ihe omume mere na igosipụta ngosi.
Ọgbakọ Bara Uru: Ckingchọpụta ọnụ ọgụgụ nke nzukọ a haziri ahazi nke gbanwere na ohere nwere ike igosi nke ndị nnọchite ahịa kachasị dị irè na ịmegharị azụmahịa na-aga n'ihu. Usoro ihe a abụghị naanị ihe dị mkpa nye CMO gị, kamakwa Onye isi ahịa ka ha nwee ike ịghọta nke ọma banyere ike onye nnọchi anya nke ọ bụla. Ozi a nwere ike inyere ndị na-ere ahịa aka ka ha tinyekwuo ha na njem ndị ahịa ma nye nghọta gbasara onye kwesịrị ịga ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Nkezi Deal Size: Ihe ịga nke ọma site na ihe omume abụghị mgbe niile ka ọnụ ọgụgụ azụmahịa na-emechi. Kama itinye uche gị niile na azụmahịa ndị buru ibu nwere obere ihe ịga nke ọma ma were ogologo oge iji mechie, lekwasị anya na nha nke azụmahịa ka ị wee nwee ike inye aka tụlee atụmanya ndị bụ ezigbo ndị ahịa na ụzọ ziri ezi.
Nsonaazụ na-achịkwa ndị isi niile. Imefu oge tupu, n’oge, na mgbe ihe omume iji nyochaa ihe rụrụ ọrụ na ihe nwere ike imeziwanye ga-enye ndị na-ere ahịa, ndị na-eme atụmatụ ihe na ndị isi ọrụ nghọta ka mma banyere mgbanwe ndị ọ dị mkpa ka eme iji hụ na ihe ga-eme n’ọdịnihu ga-aga nke ọma. Site na itinye usoro atumatu aka, ndị na-ere ahịa ga-enwe oge dị mfe iji kwado itinye ego na ihe omume, na-ahapụ ndị isi otu ụzọ ọzọ karịa ịbawanye mmefu ego maka ihe ga-eme n'ọdịnihu.
Tags: b2bika udeogbako ahiaahịa nnwetanjigide ndị ahịaemechi emechimmemme ahiaMgbakọ Ahịanzute irènzukọ ahịanzukọ nzukọ
Ravi Chalaka bụ CMO nke Jifflenow na ọkachamara na ịzụ ahịa azụmaahịa na ịzụ ahịa azụmaahịa, onye na-emepụta ma na-ewepụta atụmatụ azụmaahịa, na-eweta mkpa na ịmatakwu akara / ngwaahịa banyere ahịa asọmpi Dị ka VP nke Marketing na nnukwu ụlọ ọrụ teknụzụ buru ibu, Ravi wuru ìgwè dị iche iche na ụdị ma nwee ike ịba ụba ngwa ngwa maka ọtụtụ ngwọta dabere na Big Data, SaaS, AI na IoT software, HCI, SAN, NAS. Ravi nwere ogo MBA na ahia na ego ma bụrụkwa onye nkwuchite ụlọ ọrụ ọkachamara na onye ngosi
5 Irè Mobile Conversion Optimization Atụmatụ Nke Na-emeri Gị Ndị Ahịa